Ahoana ny fomba hamoronana pejy web: ny safidy hafa azonao atao | Famoronana an-tserasera
Inona ny safidy azoko atao hamoronana pejy web
Manuel Ramirez | | Famolavolana tranonkala, Wordpress
ankehitriny 60% n'ny tranonkala rehetra noforonina dia miaraka amin'ny WordPress, CMS (Content Management System) izay, noho ny fahaizany lehibe sy ny làlan-kizorana tena tsara, dia napetraka ho ny safidin'ny mpandraharaha maro sy ireo izay tsy.
Saingy tsy manana WordPress noforonina fotsiny isika pejy web ao anatin'ny fotoana fohy, fa mbola misy safidy hafa hafa toa ny Blogger, Wix, Squarespace, Weebly, Shopify na Ionosa 1 & 1. Ny fahasamihafana lehibe eo amin'izy ireo dia ny vahaolana omeny sy izay rehetra azonao atao ary ny fotoana sy ny ezaka ilaina hanatanterahana izany. Hanomboka amin'ny tsotra indrindra isika handehanana any amin'ireo safidy sarotra kokoa.
3 1 & 1 Ionos
9 Mamorona tranonkala avy amin'ny 0
10 Ny tsy ampoizina farany: mamorona tranokalanao miaraka amin'i Github
Wix dia lasa amin'ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny mamorona pejy web mora foana ao anatin'ny minitra vitsy. Izy io dia sehatra an-tserasera iray izay mamonjy anao ny ezaka fandaminana, mianatra CSS kely na mahafantatra HTML amin'ny tanjona sasany.
Tsy maintsy misafidy vitsivitsy fotsiny ianao modely (avo lenta by the way), misafidy ny handray ny fonenanao manokana ary mandehana mitaritarika sy milatsaka hananganana tranokala fototra ao anatin'ny minitra vitsy. Ny iray amin'ireo hatsaram-panahy lehibe indrindra an'ny Wix dia ny fanatsarana azy ho an'ny finday, noho izany dia ho vitanao amin'ny maodely fototra ny zava-drehetra.
Ny lesoka fotsiny dia ny Wix ho avy tsara ho an'ny pejy fototra manorata pejy fitobiana na ireo izay mampiseho ny serivisinay, fa raha efa maniry zavatra sarotra kokoa izahay, toy ny famoronana e-varotra na iray natao hamandrihana ary avy eo dia mividy ara-batana dia tsy maintsy mitady fomba hafa isika.
Raha mila fotsiny isika manangana bilaogy fa tsotra be izahay, satria mamela antsika hanana bilaogy ao anatin'ny minitra vitsy ny Blogger. Mazava ho azy fa hampiantrano azy amin'ny mpizara Google ary hiseho ao amin'ny URL ny anaran'ilay sehatra.
Na izany aza, vahaolana tonga lafatra ho an'ireo izany tsy te handany denaria izany, te hanana bilaogy navoaka tao anatin'ny minitra ary afaka manampy fiasa bebe kokoa aza miaraka amina modely sy fotokevitra vitsivitsy. Aza manandrana mamorona zavatra mahafinaritra be amin'ny Blogger, na dia tsy maintsy manome atiny kalitao aza ianao dia fomba tsara kokoa hahatratrarana mpampiasa maro.
Safidy hafa hamoronana pejy web, na dia tsy maimaim-poana aza. Saingy mamela antsika handrefy ny orinasanay izy io noho ny maodely na dia tsy dia novolavolaina tahaka ny an'ny Wix aza izy ireo.
Mora kokoa ny manangana tranokala misy Ionosa 1 & 1 noho ny amin'ny WordPressIndrindra raha manana orinasa kely mila manana ny tranokalany amin'ny tamba-jotra isika ary tsy manana hevitra momba ny fandaharana na mbola nandalo CMS toy ny WordPress mihitsy.
Ity vahaolana ity dia drafitra fandoavam-bola telo hananganana ny tranonkalanao, toy ny iray mifantoka amin'ny ecommerce. Araka ny efa nolazainay, raha tsy maintsy mivarotra repertoire kely amin'ny vokatra ianao dia mety ho fomba mahaliana raha tsy mila zavatra sarotra ianao.
Weebly dia hafa fifanarahana lehibe ho an'ny orinasa kely ary izany dia miavaka amin'ny fikarakarana tsara ny olan'ny SEO. Mila manome lanja lehibe ny toeran'ny motera fikarohana ianao, satria raha miankina amin'ny fidiran'ny mpampiasa avy amin'ny fikarohana ny tranokalanao, raha mbola tsy manatsara ny tranokalanao ho an'ny SEO ianao, dia ho sarotra be izany, raha tsy azo atao izany.
Weebly dia miavaka amin'ny azy koa fanamorana ny fampiasana noho io fiasa hisintona io ary alatsaho ny tolotra omeny. Mazava ho azy, hadino ny fahafahanao mamerina amin'ny laoniny ireo tranokala anananao ary miomàna handoa kely kokoa noho ny nandrasana, indrindra raha miala amin'ny drafitra maimaimpoana izay manana izany ianao. Ny drafitra dia manomboka amin'ny $ 8 ka hatramin'ny $ 38 isam-bolana.
Ary tsy manana modely, na dia lavitra ny an'ny Squarespace sy Wix aza. Mazava ho azy, azonao atao ny mampiditra ny kaody momba ny kaody mba hikitika manokana ny tranonkalanao.
Shopify dia lasa ankehitriny iray amin'ireo sehatra ahazoana aina indrindra hampandehanana ny orinay mivarotra karazan-vokatra rehetra amin'ny Internet. Tsy dia sarotra noho ny fametrahana ecommerce ao amin'ny WordPress, izay ilainay ny plugins toa ny Woocommerce, saingy azo ferana amin'ny lafiny sasany; Raha tsy apetrakao ny SEO (Search Engine Optimization), azo antoka fa safidy tsara kokoa ny WordPress.
Izay rehetra nilaza hoe, Shopify dia izao iray amin'ny ecommerce ankafizina indrindra ary ampiasain'ny orinasa maro. Izy io dia miavaka amin'ny rafi-tahiry mamirapiratra, zavatra iray tena ilaina amin'ny ecommerce izay tsy maintsy fikirakirany vokatra an-jatony na an'arivony. Androany Shopify dia manana fivarotana maherin'ny 600.000 manerana an'izao tontolo izao.
Ny tombony lehibe azony dia ny lafiny teknika rehetra avela amin'ny sehatra ary mba hahafahanao mifantoka amin'ny fandaminana ny fivarotanao, ny vokatrao, mamorona farango ary manaova paikady varotra hamidy.
Tsy toy ny WordPress Woocommerce, manana izy vidiny isam-bolana miovaova eo anelanelan'ny 29 sy 299 dolara.
Tranonkala tsara iray hafa hananganana ny tranonkalanao, na dia tsy mora ampiasaina aza ilay voalaza etsy aloha. Izany dia iray amin'ireo endrika tsara indrindra ary manolotra modely avo lenta ho an'ny mpampiasa. Izy io koa dia manana repertoire tsara momba ny endri-javatra hiresahana ny tranokalanay voalohany.
Afaka tany Squarespace izahay manindrona azy eo anelanelan'ny mora vitany mamorona tranokala amin'ny Wix ary eo anelanelan'ny olana lehibe kokoa hanaovana azy amin'ny WordPress. Antsasaky ny antsasak'izay izao ny mpampiasa manana fotoana sy fahaizana bebe kokoa, maka ny fiezahany hamorona tranokala mahafinaritra.
ny tsy mora velively ny drafitra, saingy satria manome modely tsara tarehy izy ireo, dia azo atao izany. Izy io koa dia miavaka amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny finday; izany hoe, mifanaraka amin'ny haben'ny smartphone sy ny takelaka, zavatra iray lehibe ankehitriny raha te hanangana tranokala ianao.
Nandalo ny drafitra Squarespace 12 ka hatramin'ny 40 dolara isam-bolana. Averinay fa toy ny ambin'ny solony hafa voalaza, raha mila zavatra voafaritra kokoa ao amin'ny tranokalanay izahay dia tsy ho afaka hanome izany ho antsika akory i Squarespace.
Miaraka amin'ny WordPress dia mankany amin'ny CMS iray manontolo isika fa raha apetraka eo akaikin'ny Drupal isika, iray izay miadana kokoa ny fiankinan-doha ary ilaina ny miditra amin'ny programa PHP (na dia tsy ilaina aza) dia mora kokoa izany. Ny zavatra tsara indrindra momba ny WordPress dia azonao atao mandehana mora, mametraka lohahevitra kalitao maimaimpoana, makà fampiantranoana ary afaka ora maromaro dia hanana tranokala kalitao mahavariana ianao.
Na, mandeha mafy ianao, makà lohahevitra madio madio ary manomboka fandaharana mba hamoronana tranokala natokana ho an'ny bilaogy, ecommerce na karazana tranokala, hatramin'ny Tsy misy farany ny fahafaha-manao WordPress ankehitriny. Mety manontany tena ianao hoe maninona ianao no afaka misafidy ny handahatra ny tranokalanao amin'ny WordPress, ary izany dia noho ny lohahevitra SEO fotsiny, iray amin'ireo antony isafidianan'ny maro ny hanao ezaka kely ary hianatra ny fomba fampiasana WordPress.
Ary io WordPress io ve, noho ny vondrom-piarahamonina lehibe sy goavambe, ary amin'ny alàlan'ny lohahevitra sy plugins ao aminy, afaka nitombo haingana tato anatin'ny taona vitsy lasa. Raha te handentika ao amin'ny tontolon'ny WordPress ianao dia manome sosokevitra iray sy mpanorina pejy mitete-ary-milatsaka:
Oceanwp- Nandalo fametrahana 1 tapitrisa izy ary izao no lohahevitra WordPress tsara indrindra. Miorina amin'ny finday, tonga lafatra ampiasaina amin'ny Woocommerce (sehatra fivarotana an-tserasera miaraka amin'ny fototra) ary manadio na amin'ny fehezan-dalàna na amin'ny fahafaha-manao izay tokony hampitomboana ny mampiavaka azy amin'ny alàlan'ny plugins sy extensions an'ny developer.
Elementor: no rafitra tsara indrindra ankehitriny ho an'ny WordPress. Miaraka amin'i Oceanwp dia mamorona duo bibidia izy ireo hamorona tranokala misy kalitao tsara amin'ny ambaratonga rehetra. Izany hoe, nohamarinina ho an'ny hafainganam-pandehan'ny famoahana tranokala, asa isan-karazany, namboarina ho SEO ary sarotra amin'ny singa samihafa. Tokony holazainay fa mahazo ny tsara indrindra amin'izany ianao amin'ny alàlan'ny fahazoana ny kinova Pro elementor, indrindra noho ny karazan-tsivana maro karazana hamoronana karazana tranonkala rehetra.
Olana hafa hodinihina ary iza no tsara indrindra amin'izao fotoana izao Izy ireo dia GeneratePress sy Astra Theme izany dia eo amin'ny haavon'ny Oceanwp. Na izany na tsy izany dia ny manandrana ny iray na ny hafa hahitana izay mety indrindra amintsika amin'ny vahaolana tadiavintsika.
Manolotra WordPress plugins isan-karazany ho an'ny karazana asa rehetra toy ny fiarovana ny tranokalanao, backup ary ny fifindra-monin'ny tranonkalanao mankany amin'ny URL hafa na kopia iray ho toy ny backup, atiny mavitrika hamoronana pejy mpivarotra ary mamela antsika hamolavola ny birao mba hananantsika azy araka ny tadiavintsika .
ny sasany amin'ireo plugins WordPress malaza indrindra Ireo dia ary avelany hamorona tranokala misy atiny mavitrika aza:
Sehatra manokana mandroso: mamela anao hamorona saha mavitrika izay hamoronana karazan-pejy rehetra ho an'ny karazana vokatra. Miaraka amin'i Elementor dia bibidia tsotra izao.
Yoast SEO: iray amin'ny tombam-bidin'ny plugin par mba hametrahana ny tranokalanay ho voatsinjara tanteraka. Mamela anao hamorona sitemap mihitsy aza izy io mba hahafahan'ny mpikaroka Google mandinika ny tranonkalantsika amin'ny fomba tsara kokoa.
Woocommerce: ny rafitra tonga lafatra hamoronana ny ecommerce anao sy miavaka amin'ny fananana izay rehetra ilaintsika hananana ny fivarotana an-tserasera. Misaotra ny vondrom-piarahamonina lehibe misy ao amin'ny WordPress, misy plugins maro hafa izay manitatra ny mampiavaka azy.
Ny fifindra-monina WP iray: fitaovana tonga lafatra hifindra tranokala iray manontolo ary hamorona backup raha sendra misy izany.
Fankatoavana Cookie GDPR: hitandrina ny zava-drehetra momba ny lalàna vaovao momba ny fiarovana angon-drakitra Eoropeana.
WP Rocket: ny plugin tsara indrindra (na dia voaloa aza) hanatsara ny famoahana ny tranokalanao, ho azy daholo.
Farany lazao anao ihany koa izany afaka mampiasa ny kinova tranokala WordPress ianao fa, na dia voafetra ihany aza izy io, dia manome safidy maro ihany koa; Toy ny Blogger, satria misy itovizany maro amin'ny vahaolana omeny ary afaka minitra vitsy dia mamela antsika hanana bilaogy.
Drupal dia CMS iray hafa, saingy araka ny efa nolazainay, haharitra kokoa aminao ny fiankinan-doha. Ankoatr'izay Ilaina ny fahalalana fandaharana, na dia marina aza fa raha hanangana tranokala fototra dia afaka misintona ireo modules isika nefa tsy mandalo programa. Na dia mazava ho azy aza, raha te hahatratra ny haavon'ny tranonkala sasantsasany izay hataontsika amin'ny Squarespace dia mila miasa mafy isika ary manana fahalalana momba ny CSS.
Drupal dia CMS ampiasain'ny orinasa izay ananan'izy ireo mpandahatra fandaharana sy ny fahamarinana fa mahatratra an'io ambaratonga io dia afaka mamorona pejy web izay tonga ao an-tsaina. CMS maimaim-poana toy ny WordPress izy io ary mampiavaka azy ihany koa ny fisehoany modular, na dia izay voalaza aza no iray amin'ireo sarotra indrindra.
Manana izany Tranonkala NASA ary toerana hafa toa an'i Casablanca. Na dia nandefa tranokala vaovao miaraka amin'ny WordPress aza izy ireo tamin'ny farany; zavatra momba ny fivoarana.
Mamorona tranonkala avy amin'ny 0
Mazava ho azy, ny ezaka dia ho be, ary koa ny fotoana amin'ny fahalalana ny fomba fitantanana ireo fiteny ireo. Raha mahomby isika dia afaka misafidy ny hamoaka tranokala izay hampatahotra ary hamboarina tsara. Izahay koa Afaka manangana fiainana amin'ny maha matihanina amin'ny fampandrosoana web isika ary izany, raha ny fanazavana, dia tsy mitaky zavatra mora vidy izy ireo. Manoro hevitra anao izahay mba hijery bebe kokoa momba ny dikan'ny hoe mpamorona stack.
Ny tsy ampoizina farany: mamorona tranokalanao miaraka amin'i Github
Githoba, ankoatry ny maha-sehatra tsara indrindra azy ho an'ny fampandrosoana fiaraha-miasa Amin'ny alàlan'ny famelana anao hampiantrano tetikasa iray amin'ny alàlan'ny rafitra fanaraha-maso ny kinova Git, dia mamela anao hampiantrano ny tranonkalanao manokana tsy misy vidiny ihany koa.
Ny tombony lehibe azo amin'ny fampiasana Github ho an'ny ny fandefasana ny tranonkalanao dia zero ny vidinyTsy maintsy mamorona tranokala HTML miovaova ianao. Ny tsara indrindra dia manana rindrambaiko birao ianao ahafahanao mandray ireo dingana voalohany amin'ny HTML hananana tranokala fototra. Ary tsy dia sarotra koa izany!
Tsy maintsy apetraho ny fampiharana GitHub Desktop ho an'ny macOS na Windows, mamorona tetikasa vaovao, kopia ny fisie fototra ho an'ny tranonkala ary apetaho. Raha te-hametahana azy io isika dia afaka mahazo sehatra amin'ny fampiantranoana (tsy mihoatra ny 10-12 euro isan-taona izy ireo) ary alefa indray izy io hanana io tranonkala io amin'ny vidiny ambany indrindra.
Mamporisika azy izahay ho anao izay manomboka kaody amin'ny HTML ary dia mandeha mamorona tsikelikely ny tranonkalanao manokana ianao. Io no zavatra tsara ananana, maimaim-poana. Ary ho gaga ianao amin'izay azon'ny sasany atao amin'ny fomba fanontana tranokala miaraka amin'i Github.
Y Ity no fomba hamaranantsika ity fanadihadihana ireo safidy samihafa ananantsika ity mamorona tranokala ary manomboka amin'ny tambajotran'ny tambajotra. Amin'ireo safidy rehetra amin'izao fotoana izao dia mandresy ny WordPress noho ny antony maro. Ny vondrom-piarahamoniny lehibe, plugins an'arivony, lohahevitra tsy andoavam-bola avo lenta sy karama ary mora toy izany ny manomboka programa miorina amin'ny lohahevitra iray.
Mazava ho azy, raha tsy te handany fotoana sy mandefa tranokala fototra na ecommerce Miaraka amin'ny vokatra tsy dia be loatra, dia manana safidy hafa hanamora ny zavatra anao ianao. Tsy misy afa-tsy ny faniriana hanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Wordpress » Inona ny safidy azoko atao hamoronana pejy web
Wordpress ho an'ny tranonkala matihanina ??????
Ho an'ny famoronana tranokala tsy dia kely mintsy amin'ny bilaogy misy fiheverana, ny kely indrindra dia Drupal na Joomla. Tsy misy tahotra, tsy misy fifanolanana, tsy misy fanjifana tafahoatra, tsy misy gurus mpivarotra an'arivony ao ambadika….
Miaraka amin'ny fahafaha-mandanjalanja tsara an'ny CMS voavolavola tsara, misy fotony mahery sy solvent izay tsy mila mametraka plugins amin'ireo ray aman-dreny tsy fantatra.
Azafady mba aza adino foana ny olona. WordPress dia bilaogy azo zahana; izany no hatsarany lehibe sy ny ombelahin-tongony Achilles goavambe. Tsy mety amin'ny CMS solvent amin'ny famoronana tranokala na fivarotana an-tserasera. Ireo mpanao sariitatra maso an'arivony an'arivony tsy maniry na tsy mahalala ny fomba hianarana boky torolalana tsotra ho an'i Joomla, Drupal, Prestashop na EE (ohatra) dia milaza bebe kokoa momba ny tenany fa tsy momba ireo fitaovana ampiasainy.
Mazava ho azy, raha mahatakatra ireo tranonkala ho zavatra mihoatra ny pejy vitsivitsy misy bokotra sy loko ianao handefasana ny mpanjifanao.
Valiny tamin'i Miguelangel
Amin'izay fotoana izay dia tena misy fisalasalana fa tsy afaka manao pejin-tranonkala matihanina ianao amin'ny WordPress?
Fantatro fa miaraka amin'i Drupal dia afaka mamorona tranokala voatsara tanteraka ianao nefa tsy misy ny plugins WordPress ao aminy, fa ho an'ireo mpampiasa maro izay tsy te-handalo PHP ary tsy manana fahalalana avo lenta momba ny fandaharana, WordPress dia tonga lafatra kokoa vahaolana.
Raha ny marina ny WordPress dia eo amin'ny 34% mahery amin'ireo tranonkala navoaka ary 60% an'ny CMS. Ary Drupal? Mijanona amin'ny 1,5% amin'ny tranokala rehetra ve izany? (Data an'ny W3Techs)
Miaraka aminao aho fa ho an'ny tranokala natokana sy nohavaozina, Drupal, fa ho an'ny vahaolana maro hafa, ecommerce, bilaogy, pejy fandraisana ary maro hafa, WordPress dia vahaolana mihoatra ny mahomby.
Wacom Cintiq Pro 13 & 16 dia manohana ny fifandraisana HDMI izao